Nickel Wire Mesh, Metal Wire Mesh nitarina, Welded Wire Mesh - Ansheng
MANOMBOHITRA NY FAHAMARINANA avo lenta izahay
Galvanized dia tsy vy na firaka; dia dingana iray izay ametahana firakotra zinc fiarovana amin'ny vy mba hisorohana ny harafesina. Amin'ny indostrian'ny harato tariby anefa dia matetika no raisina ho sokajy misaraka izy io noho ny fampielezana azy amin'ny fomba rehetra amin'ny karazana fampiharana rehetra. Izy io koa dia azo vita amin'ny tariby vy ary avy eo ny savonin'ny zinc. Amin'ny ankapobeny, lafo kokoa ity safidy ity, manome tahan'ny fanoherana ny harafesina avo kokoa. ...
Ny vy tsotra, fantatra amin'ny anarana hoe vy karbonika, dia vy be mpampiasa amin'ny sehatry ny harato. Ny vy sy karbôna kely dia voalohany. Ny lazan'ny vokatra dia noho ny fihenan'ny vidiny sy ny fampiasa amin'ny laoniny. Volon-tariby lemaka, fantatra koa amin'ny lamba vy balck .lazo mainty .dia vita amin'ny tariby vy ambany karbaona, noho ny fomba fanenomana samy hafa .dia azo zaraina ho, tenona tsotra, tenona dutch, tenona herringbone, tenona dutech tsotra. Plain vy tariby harato no stro ...
Ny vy metaly nitarina dia vy metaly zavatra noforonina tamin'ny fanitarana vy harato totohondry sy ny fanetezam-boaloboka hamorona harato. Fitaovana: takelaka aliminioma, takelaka vy ambany karbaona, takelaka vy tsy misy fangarony, lovia nikela, takelaka varahina, takelaka firaka magnesium aluminium, sns. Fanenomana sy toetra mampiavaka azy: vita amin'ny fanisiana tombo-kase sy fanitarana ny lovia vy. Ny faritry ny harato dia manana ny mampiavaka azy amin'ny fahamendrehana, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny hafanana avo, ary ny valin'ny rivotra madio. Karazana: mifanaraka ...
Ny orinasanay dia orinasa iray manokana amin'ny famokarana sy fivarotana harato metaly isan-karazany sy fitaovana sivana. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny milina, petrochemical, plastika, metallurgy, pharmaceutika, fitsaboana rano ary indostria hafa. Ny orinasanay dia manana fitaovana famokarana sy fitsapana mandroso, fitantanana siantifika henjana ary fanaraha-maso kalitao. Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny 20 taona mahery, lasa orinasa maoderina izy io izay mampiditra R& D, endrika, famokarana, varotra ary serivisy. Ankoatry ny fahafaham-po ny mpanjifa ao an-toerana, ny vokatra vokarinay koa dia natondrana tany Etazonia, Brezila, Alemana, Polonina, Aostralia, Nouvelle Zélande, Taiwan ary firenena sy faritra hafa.